प्रवास – Halkaro
प्रकाशित मिति : २०७५, ३ आश्विन बुधबार September 21, 2018
काठमाडौं । मलेसियामा विषक्त मदिरा सेवनका कारण मृत्यु हुनेको संख्या १९ पुगेको छ। जसमध्ये ६ जना नेपाली रहेका छन्। मलेसिया स्थित नेपाली दुतावासका अनुसार म‌ंगलवार विहानसम्म मृत्यु हुने नेपालीको संख्या ६ पुगेको हो। यी हुन् मृतक नेपाली रुपन्देही साविकको मसिना गाविस वडा नं. ६ का रामकुमार यादव, धादिङ जिल्ला साविकको बसेरी–३ का मिमबहादुर घले, डडेलधुरा […]
मलेसियाको अस्पतालमा श्रीमानको शव कुर्दै विछिप्त नेपाली चेली, विषाक्त रक्सीले १९ विदेशी कामदारको मृत्यु, कति छन् नेपाली?
काठमाडौँ । ‘यो सब यति चाँडो यस्तो भयो,’ मलेसियाको सुनगाइ बुलोह अस्पतालमा मंगलबार दिउसो मृत्यु भएका एक नेपालीकी श्रीमती भन्दै थिइन्। मलेसियामा विषाक्त रक्सीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या १९ पुगिसकेको छ। अझै १४ जना अस्पतालमा उपचाररत छन्। उनीहरूको अवस्था गभ्भिर रहेको दी स्टार अनलार्इन मलेसियाले जनाएको छ। मृत्यु हुने मध्ये एक जना नेपाली छन्, आइते […]
नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक अपुरोः एनआरएनए महिला फोरम
प्रकाशित मिति : २०७५, ६ भाद्र बुधबार
बैंकक । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) थाइल्याण्डको महिला फोरमले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न हालै नेपालको संसदमा प्रस्तुत मस्यौदा विधेयक अपूरो रहेको भन्दै यसमा सुधार गर्न संसद र सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । नागरिक ऐनको यस मस्यौदाले गैरआवासीय नेपाली महिला र पूराना पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीहरुका मागहरु नसमेटिएको भन्दै संसद र सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ […]
काठकाडौँ । मलेसियामा ज्याला बढ्ने मलेसियाली निजी क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण स्वदेशी र विदेशी कामदारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ । उसले कामदारहरुको पारिश्रमिक वृद्धिसम्बन्धी नीतिगत प्रस्ताव छिट्टै नै छलफलका लागि संसदमा लग्ने भएको छ । मानव संशासन सम्बन्धी त्यहाँका मन्त्री एम कुलासेगरनले निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण कामदारको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक १५ सय रिंगिट पुर्याउनेबारे […]
प्रकाशित मिति : २०७५, २ श्रावण बुधबार
काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा साउदी अरब पुगेका खोटाङका १४ सहित ३८ जना नेपाली कामदार अलपत्र परेका छन् । विसं २०७४ फागुन १ गते साउदी अरब पुगेका खोटाङसहित विभिन्न जिल्लाका ३८ जना नेपाली युवा सम्झौता अनुसारको काम र दाम नपाएपछि अलपत्र परेका हुन् । साउदी पुगेयता ९०० रियल मात्र पाएका नेपालीले एक दिन काममा जान […]
मलेसियाली कारागारमा १५८ नेपाली, घर फर्किने आशामा डिटेन्सन सेन्टरमा १५०
प्रकाशित मिति : २०७५, २१ असार बिहीबार
काठमाडौँ । मलेसिया सरकारले अवैध कामदारहरु माथि कारवाहीलाई तिब्र पार्दै स्वदेश फर्काउन थालेको छ। यसरी पक्राउ पर्नेमा नेपालीहरु समेत रहेका छन्। मलेसिया सरकारले अवैध आप्रवासी लक्षित गरेर अप्रेशन ‘मेगा थ्री जिरो’ सञ्चालन गरेको छ। यसमा नेपालीहरु समेत पक्राउ परेको बताइएको छ। पक्राउ पर्ने नेपालीको संख्या भने एकीन भएको छैन्। मलेसिया अध्यागमन विभागले मंगलबारसम्म १ हजार […]
कतारमा एक नेपालीलार्इ गोली हानी मृत्युदण्ड दिने फैसला
प्रकाशित मिति : २०७५, २२ जेष्ठ मंगलवार
काठमाडौँ । कतारको अदालतले एक नेपालीलाई हत्या अभियोगमा मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको छ । कतारी नागरिक उम्एयर मोहम्मिद एम्ययर अल रमाजैनी अल नुएमीको हत्या अभियोगमा त्यहाँको तल्लो अदालतले अनिल चौधरीलाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको हो । यो फैसलाउपर नेपाली दुतावासले त्यहाँको सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । औरही १ महोत्तरीका चौधरी हत्या अभियोगमा २०१७ अप्रिल पहिलो साता […]
मेराे ‘सर्टिफिकेट’काे मुल्य
प्रकाशित मिति : २०७५, १८ जेष्ठ शुक्रबार June 1, 2018
एक जना युवा पत्रकार, प्रमाेद अाचार्यले केही समय अघि स्नातकोत्तर तहकाे थेसिस काण्ड सार्वजनिक गरे । विभिन्न अनुसन्धानहरुबाट प्राप्त निचोडलाई अाफ्नै बलबुतामा लेख्नु पर्ने बाैद्धिक बिषयकाे खुलेअाम व्यापार भएकाे खबर बाहिर निकाल्ने उनकाे प्रयास थियाे । र सफल पनि बने । तर याे बिषयले न अरु थप स्थान पाएकाे देखेँ न सम्बन्धित निकायले चासाे देखायाे […]
नेपाल थाइल्याण्डको कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना दिवसको अवसरमा रक्तदान
प्रकाशित मिति : २०७५, १४ जेष्ठ सोमबार
काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ थाइल्याण्डले नेपाल र थाइल्याण्डबीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको स्वर्ण जयन्तीमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। एनआरएनए थाइल्याण्डको युवा फोरमले थाइ रेडक्रस सोसाईटी बैंककमा आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा नेपाली समुदायका प्रतिनिधि तथा अन्य देशका प्रतिनिधिहरुले समेत रक्तदान गरेका थिए। कार्यक्रममा थाइल्याण्ड स्थित नेपाली दुतावासका डेपुटी चिफ अफ मिसन जंगबहादुर गुरुङ, […]
साउदी जेलमा रहेका गोरखाका कुमारलार्इ छुटाउन बाबुरामले दिने भए एक लाख
गोरखा । विगत ६ महिनादेखि साउदी अरबको अफिफ जेलमा रहेका गोरखा भीमसेन गाँउपालिका–७, बोर्लाङ सातबिसेका कुमार रानामगरलाई जेलमुक्त गराउन पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले १ लाख रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेका छन् । साउदी अरेबियाको जेलमा करिव ८३ लाख ब्लडमनी तिर्न नसके आजीवन बन्दी बनिरहने रहेका गोरखाका राना मगरको ’ जीवन रक्षाको लागि ब्लडमनी संकलन अभियान(२०१८’ लाई […]